Bụrụ China Factory Price High ịdị ọcha ulo oru oxygen generator factory na emepụta |HRF
Ụlọ ọrụ Price High-ọcha ụlọ ọrụ oxygen generator
Nrụgide ikuku: 0.7-1.3MPa(7Bar-13Bar)
Ike ikuku: 100Nm3 / h
Ọcha oxygen: 93%±2%
Nrụgide mpụga: 0.5Mpa ma ọ bụ kwa chọrọ
Ebe igirigi: ≤-40℃
Ike eletriki: 380V / 3P / 50HZ ma ọ bụ ahaziri
PSA (Nrụgide Swing Adsorption) Nkà na ụzụ mgbanwe na-abụghị Cryogenic Air Separation na Oxygen Generation Technology na-eji ọkwa pụrụ iche nke ZMS (Zolite Molecular Sieve).
A na-agafe ikuku abịakọrọ site na modul Twin Tower PSA jikọtara ya na mgbanwe akpaka n'elu valves.Mgbe ị gafechara ikuku refrigerated nke nkụ, a na-akpọnwụ.Ikuku akpọkọtara akpọnwụ ga-abanyezi na akwa Zeolite molecular sieves (ZMS).Zeolite Molecular Sieves bụ ọkwa pụrụ iche nke adsorbent nke nwere akụrụngwa nke mma mgbasa ozi nke mkpụrụ ndụ nitrogen.N'otu oge, otu ụlọ elu na-anọgide n'okpuru usoro mmepụta nitrogen, ebe ụlọ elu nke ọzọ na-emegharịghachi nke a na-enweta site na ịda mbà n'obi nke ụlọ elu na nrụgide ikuku.A na-eziga gas oxygen na-apụ apụ na ụgbọ mmiri na-awa ahụ ebe a ga-edobe nrụgide kacha nta site n'enyemaka nke Onye na-ahụ maka nrụgide azụ.
1. Edepụtara akara compressor ikuku;
2. Germany Siemens PLC njikwa ọgụgụ isi;
3. Schneider ihe eletriki eletrik, oge nzaghachi ngwa ngwa na ogologo ndụ;
4.7 inch ihuenyo mmetụ mmadụ-igwe, dị mfe iji rụọ ọrụ;
5. Solenoid valvụ na-anabata Taiwan Airtac ika, akụrụngwa kwụsiri ike ogologo oge;
6. Mmalite na nkwụsịtụ na-akpaghị aka, nkwụsịtụ akpaaka, mmalite akpaaka na nkwụsị mgbe ntinye ngwa ngwa nke oxygen ruru eru;
7. Pneumatic valve na pneumatic valvụ njikọ ọkpọkọ bụ nke igwe anaghị agba nchara, obere nguzogide oyi;
8. Site na nzacha ikuku carbon arụ ọrụ, mmetụta mwepụ mmanụ ka mma;
9. Nnukwu ngwá ọrụ na-eji cylinder mkpakọ ngwaọrụ, iji gbochie molekụla sieve ntụ ntụ, iji meziwanye ndụ ọrụ;
10. Bawanye onye na-ejide ire ọkụ, ihe egwu ọkụ na-ekwe nkwa;
11. A na-eji pipeline na ọnụ ụzọ agụ akwụkwọ akara ngwá ọrụ dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị, nke dị mma maka njikwa na nhazi.
Asụgharị ya na www.DeepL.com/Translator (ụdị efu)
Ụlọ ọrụ nwere ike inye PSA VPS nitrogen osisi, PSA oxygen osisi, PSA elu
PSA mgbanwe nrụgide adsorption osisi oxygen, PSA mgbanwe nrụgide adsorption osisi hydrogen dị ọcha dị elu, ikuku oxygen decomposition hydrogen osisi.
hydrogen, hydrogen-nitrogen proportioning akụrụngwa, gas ọcha akụrụngwa, gas mgbake akụrụngwa, ikuku ọcha
Anyị nwere ike ịnye ihe ngwọta dị iche iche nke gas dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Anyị nwekwara ike ịnye ihe ngwọta dị iche iche nke gas dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, ma nye ndị ahịa nitrogen, oxygen na hydrogen mmepụta ngwá ọrụ na ihe ndị yiri ya.
Anyị nwere ike inye ndị ahịa nlekọta nke nitrogen, oxygen, hydrogen na ihe ndị yiri ya, ọzụzụ teknụzụ na ndụmọdụ teknụzụ, wdg.
A na-eji ngwá ọrụ na-eme ihe n'ọtụtụ ebe na-abụghị ferrous, ferrous metal, okpomọkụ ọgwụgwọ, chemical ụlọ ọrụ, mmanụ ala
ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ rọba, ụlọ ọrụ rọba, ụlọ ọrụ eletrọnịkị, biya na ihe ọṅụṅụ, nchekwa nri
ụlọ ọrụ ọhụrụ, metallurgical, ụlọ ọrụ iko, ụlọ ọrụ coal, nkwado teknụzụ ikuku na ụlọ ọrụ ndị ọzọ
Ngwá ọrụ ahụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi.
Isi: Highland oxygen generator, Highland dispersion oxygen ọkọnọ igwe, PSA variable mgbali adsorption cyanide osisi, PSA mgbanwe nrụgide adsorption osisi oxygen
PSA VPS oxygen osisi, PSA VPS hydrogen dị elu dị ọcha, osisi ire ere dị mgbagwoju anya
ngwaọrụ radon, ngwaọrụ hydrogen-nitrogen proportioning, gas dị ọcha ngwaọrụ, gas mgbake ngwaọrụ, ikuku
akụrụngwa gas dị ka ọrụ nhicha gas
Nke gara aga: Top ika pụrụ ịdabere na àgwà psa oxygen generator
Osote: Igwe ikuku oxygen na-adịgide adịgide na nke dị elu rere nke ukwuu maka ire ere
Ọkachamara kemịkalụ oxygen generator na Peru ...
Top ika pụrụ ịdabere na àgwà psa oxygen generator
99% ịdị ọcha ọkwa ahụike oxygen n'ichepụta
A na-erekarị ikuku oxygen na-adịgide adịgide ma dị elu ...